Aimee Witteman ayaa hoggaamisa barnaamijka McKnight Foundation ee Barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta, kaas oo diiradda saaraya dhiirrigelinta tamarta nadiifka ah iyo horumarinta ee gobollada Dhexe. Doorashadan, waxay la shaqaysaa kooxo kala duwan oo ganacsi, macaamiil, cadaaladda bulshada, deegaanka, iyo ururada shaqaalaha. Witteman ayaa sidoo kale guddoomiya kooxda maalgalinta Energy Energy Energy, waxayna u adeegtaa guddiyada maamulka ee Qeybta Dood-wadaadeynta Cimilada iyo Kooxda Cimilada iyo Tamarta Qaranka.
Barnaamijka Midwest Climate & Energy ayaa la bilaabay sannadka 2013 ka dib markii uu hogaamiyay Witteman kadib markii ay hoggaamisay guddiga iyo shaqaalaha waayeelka ah ee dib u habayntiisa. Witteman waxay ka faa'iideysteen deeqaha, maalgashiga saameynta, iyo ka qaybgalka hogaamiyayaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo hormariyo nidaamka tamarta ee gobolka.
Markii hore, Witteman wuxuu u shaqeeyay sarkaalka barnaamijka deegaanka deegaanka McKnight oo ku takhasusay tayada biyaha iyo nidaamka beeraha. Dhanka kale, waxa ay haysaa hoggaanno hoggaaneedyo dhowr ah oo ka mid ah ururada aan macaash doonka ahayn, oo hagaya siyaasad-dejinta siyaasadeed ee dadweynaha, isgaarsiinta istaraatiijiga ah iyo dedaallada ololaha isbahaysiga. Witteman wuxuu ahaa Agaasimaha Fulinta ee ugu Horreeya Isuduwaha Beeraha Beeraha ee Washington, DC, halkaas oo ay ku doodeen in la sii wadi karo nidaamyada cuntada, khayraadka dabiiciga ah iyo bulshooyinka reer miyiga ah. Witteman waxay leedahay MS ee cilmiga sayniska iyo siyaasadda ee Jaamacadda Tufts. Marka aysan imaanin shirarka, Witteman waxay ku raaxeeyaa isku socodka xayawaanka waqooyiga waxayna boggeeda la leedahay laba gabdhood oo yar.
U guuritaanka Tamarta Nadiifinta Tamarta
By Aimee Witteman Abriil 2017
By Elizabeth McGeveran, Aimee Witteman Disembar 2015
By Aimee Witteman, Lee Sheehy Oktoobar 2014